Ibhulashi lamazinyo, Ibhulashi lamazinyo elwa namagciwane, Ibhulashi lamazinyo elithambile - i-Enyuan
Polymer High tpu bristles isixubho uvikela t ...
IHuaian Enyuan Tourist Products Co, Ltd.
IHuai'an Enyuan Tourist Products Co, Ltd.yinkampani egxile ekukhiqizeni nasekusebenzeni kwemikhiqizo yamabhulashi wamazinyo, ikakhulu kufaka phakathi uchungechunge lwamabhulashi neminye imikhiqizo eminingi. Imikhiqizo emikhulu: amabhulashi wamazinyo epulasitiki, amabhulashi wamazinyo ayimbumbulu, izisuli zolimi, amabhulashi wokuvala amehlo, amabhulashi wamazinyo, njll. Isitshalo senkampani sihlanganisa indawo engaphezu kwamamitha angama-4,000. Bangaphezu kuka-80 abasebenzi.
Umehluko phakathi kwama-bristles aqinile futhi athambile ekhanda lebhulashi lamazinyo
Uma kuqhathaniswa namabhulashi wamazinyo aqinile, amabhulashi amazinyo athambile awalimazi kangako emazinyweni futhi athole ukuthandwa ngabathengi abaningi. Ake sihlolisise umehluko phakathi kwamabhulashi amazinyo athambile nalawo alukhuni, nokuthi amabhulashi wamazinyo athambile asetshenziswa kanjani. Uyini umehluko phakathi kwebhulashi lamazinyo elithambile a ...
Ungayikhetha kanjani isixubho sezingane
Iningi labazali lizohlakulela umkhuba wezingane zabo wokuxubha amazinyo kusukela ebuntwaneni, ngakho-ke izingane kufanele zixubhe nini amazinyo azo kangcono? Hlobo luni lwebhulashi lamazinyo okufanele ngilikhethe? Yiziphi izinyathelo zokuphepha lapho ukhetha ibhulashi lamazinyo lezingane? Ake sabelane namuhla: Ungayikhetha kanjani i-chi ...
Ungayikhetha kanjani isixubho
Okokuqala, lapho uthenga inkomishi yokugeza umlomo, udinga ukunaka ukwakheka okuningiliziwe kokusebenza kwebhulashi lamazinyo, okuchazwe kulezi zinyathelo ezintathu ezilandelayo. Okokuqala, sidinga ukunaka ukwakheka kwebhulashi lamazinyo, njengokwakhiwa okumise amagagasi, okulingana nomlomo ...
Thola ngemuva kokubukeka!